Karen Community Association UK: ကွဲနေသော ကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်း
The Eubank girls singing - 07/19/09
Interview With SawLar Bwe & Saw Paw Do
ဝေါ်လေ၊ ချောင့်ခက် နဲ့ သင်္ဃန်းညီနောင် ဒီကနေ့ တိုက်ပွ...
In eastern Burma conflict, medics face the same da...
BGF Defectors' Families Abducted
Saw P's Choice
ကွဲနေသော ကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ပြန်လည်ပူး...
KNU President's Address on 62nd Anniversary of Kar...
KNLA7BRIGADE IN ACTION
ဖလူး နဲ့ ဝေါ်လေဒေသ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် အခြေအနေ
၀ါရင့်ကရင်နီခေါင်းဆောင် ခူးထဲဘူးဖဲ ကျန်းမာရေးကြောင...
နယ်စပ်တိုက်ပွဲများမှာ အကျဉ်းသား ပေါ်တာများကို စစ်တပ...
Images From Karen New Year 2750 Sheffield UK
KNLA အရာရှိတဦး၏ BGF အပေါ်သဘောထား
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆရာမစီပိုးရာစိန် မှ UK န...
DKBA Interview DVB 20 12 2010
Thai Karen invitation for Karen New Year
ဒီကနေ့ ချုကလီ နားက နအဖ ၈ ယောက်ကျတဲ့ တိုက်ပွဲ
Karen People in the UK Celebrate Karen New Year
ကွဲနေသော ကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ပြန်လည်ပူးပေါင်း
Tuesday, 25 January 2011 14:44 KNG
ကွဲနေသော အဓိက ကချင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် ပြည်ပအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO) တို့သည် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တစ်နေရာတွင် KIO မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် KNO ဥက္ကဌနှင့် ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် ၎င်းစာချွန်လွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုပါတယ်။” ဟု UK-KNO ရုံးတာဝန်ခံ လရှီးဂွန်းတောင်က ပြောသည်။
ဆက်လက်ပြီး “ဒီပေါင်းစည်းမှုက ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။” ဟု ဆိုသည်။
၂ ရက်ကြာအစည်းအဝေးအပြီးတွင် မြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ကချင်လူမျိုးများအတွက် နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ် ၆ ချက်ကိုအခြေခံကာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားရန် ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ထုတ် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုအတွက် ငြိမ်းချမ်းစွာ နိုင်ငံရေုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာခြင်းဖြင့် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကို အခြေခံကာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းသဘောတူညီမှုတွင် ပါရှိသည်။
ဗမာ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းနှင့် အခြားလူမျိုးစုများ ပါဝင်သည့် ပြည်ထောင်စုမူကို ခံယူပြီး လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
KNO ဥက္ကဋ္ဌ ဘွမ်ဝေါင်လရော်က ယခင်က KNO နှင့် KIO ကြား ရည်ရွယ်ချက်ခြင်း တူသော်လည်း ခေါင်းဆောင်များကြား နားလည်မှုလွှဲကာ အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့ကြောင်း လရှီးဂွန်းတောင်ဆိုသည်။
ဆက်လက်ပြီး အဖွဲ့အစည်း ၂ ခုသည် အတူတကွပူးပေါင်းရန် ကာလအတန်ကြာကတည်းက ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း ယခုမှ နားလည်မှုစာချွန်လွှာပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေမှာခု ရောက်နေတော့ ကျွန်တော်တို့ကြား စည်းလုံးမှုက အင်မတန် အရေးကြီးတယ်။” ဟုဂွန်တောင်ကပဲ ဆက်ပြောသည်။
၁၉၉၄ KIO နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့ပြီးနောက် KNO အား ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၉ ရက်တွင် ပြည်ပရောက်ကချင်များ ထူထောင်ခဲ့သည်။
၁၉၆၀ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် KIO သည် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ကချင်လူမျိုးများကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့်အတွက် ၁၉၆၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ တွင်စတင်သည့် ၎င်း၏လက်နက်ကိုင် KIA တပ်ဖွဲ့ဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အပစ်မရပ်ခင် ၁၉၉၄ အထိ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
“ခု အဖွဲ့ ၂ ခုကြားမှာ နားလည်မှုရတာက ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ KNO က ပြည်ပမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ KIO က ပြည်တွင်းမှာလုပ်။ ဒီပေါင်းစည်းမှုက အရေးကြီးတယ်။” ဟု ပြည်ပတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်းသားတစ်ဦးပြောသည်။
KIO က KNO နှင့်ပူးပေါင်းရခြင်းသည် နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းကို အလေးထားလာရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ယခင် ၁၉၉၄ KIO ဥက္ကဋ္ဌ မရန်ဘရန်ဆိုင်း ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ပြည်တွင်းထဲသာ နိုင်ငံရေး ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းကျောင်းသားကပဲ ပြောသည်။
“ဒီသဘောတူညီမှုဟာ အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာ အသီးသီးရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အတွက်မစဉ်းစားသေးတဲ့ သဘောတူညီမှုဖြစ်တယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကချင်လူမျိုးအတွက် စစ်တပ် တစ်ခုပဲ လိုအပ်တယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ၂ ခုမလိုအပ်ဘူး” ဟု ဆက်ပြောသည်။
ယင်းကျောင်းသားကပဲ နှစ်ဖွဲ့လုံးသည် တူညီတဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ဆီလျှောက်လှမ်းနေကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းနားလည်မှုစာချွန်လွှာအား KIO ဘက်မှ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ အင်ဘန်လ၊ ဒု-သဘာပတိ ဂေါ်ရီဇော်ဆိုင်း၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် လဖိုင်လ နှင့် KNO ဘက်မှ သဘာပတိ ဒူဝါဟော်ဝါးဂျာလ၊ ဥက္ကဋ္ဌ ဒူဝါဘွမ်ဝေါင်လရော် နှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဒေါက်တာလထော်နော်လောန် တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။